Firefox Browser ရဲ့ Home Page Site ကိုပြောင်းမရလို့ပါ.... - MYSTERY ZILLION
Firefox Browser ရဲ့ Home Page Site ကိုပြောင်းမရလို့ပါ....
Handy Cafe Client သွင်းပြီးကတည်းက Firefox ရဲ့ Home Page က Handy cafe ပဲဖြစ်နေပြီး ...
Option မှာပြန်ပြောင်းရင်းလည်း ....
Home page ကို www.google.com ပဲထားချင်လို့ပါ။
စစချင်းတက်လာတဲ့ browser ကိုပိတ်လိုက် mozilla firefox ကိုနှိပ်ပီးပြန်ဖွင့်ရင် defaut လုပ်ထားတဲ့ home page ပဲပေါ်မှာပါ
စစချင်းတက်တဲ့ ့handycafe.com ကိုပိတ်ချင်ရင်တော့ အဲ့ဒီlink မှှာ ရေးထားတယ်
page မကျအောင်ပဲ block လုပ်ထားလို့ရတယ်။
ဒါပေမယ့် home page လိပ်စာတော့ပြောင်းလို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်။
Virus ၀င်သလိုမျိုး... (hijacker) လိုမျိုး ...
home page address ကို သိမ်းပိုက်ထားတယ်။
ကူညီပါအုံး . . . ဂုရုကြီးများ ... ခင်ဗျာ....
ကျွန်တော်လည်း firefox ပြသာနာလေးကို ဒီပို့စ်အောင့်မှာပဲမေးလိုက်တော့မယ် ကျွန်တော်မှာက ်firefox ကိုဖွင့်လိုက်တိုင်း bluescreen ချည်းပေါ်ပေါ်လာတယ်ဗျာ အဲဒါနဲ့ restart ပြန်ပြန်ချနေရတယ် ဘယ်လိုလုပ်ရမှန်းလည်း မသိဘူး firefox ကို uninstall လုပ်ပြီး install ပြန်လုပ်ပြန်ဖွင့်လိုက်ရင်လည်း ပေါ်လာပြန်ပြီ အဲဒီ bluescreen ဒါနဲ့ firefox ကိုထိလို့တောက်မရဲဖြစ်နေတယ်ဗျာ တတ်သိနားလည်တဲ့ အကိုအမများ ကူညီကျပါအုန်း။
ကူညီပါအုံး ... ဆရာတို့ရေ...
MZ ကမကယ်နိုင်တော့ဘူးလားဗျို့ ...